PSJTV | गर्नु गर्यौ गुणराज, जातै फालेर
गर्नु गर्यौ गुणराज, जातै फालेर
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) फ़ुट्नैपर्ने संस्था हुँदै होईन। तर गुणराजले यसलाई फुटायो। नकाम गर्यो।
शनिबार, १९ साउन २०७५ राजेश मिश्र
गुणराज लुईंटेल हृदयबाटै खराब मान्छे होईन। तर मगजले हृदयमा ठोकेपछि मान्छे बहुलाउँछ। गुणराजको मगजमा अभिमानको मुङ्ग्रो बजारिएछ यो पटक। नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) फ़ुट्नैपर्ने संस्था हुँदै होईन। तर गुणराजले यसलाई फुटायो। नकाम गर्यो।
यो भूमिका पनि होईन। प्राक्कथन बाँकी छ। तर यो कुरा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ। सन् २००५, सेप्टेम्बर महिनाको सात गते म गौतम दाहाल नामको एउटा अजीव मनुष्यलाई आफ्नो औंला समाउन दिएर नयाँ दिल्लीको ईन्दिरा गान्धी एयरपोर्टमा प्रवेश गरें। जहाज चढिसकेपछि गौतमले आफ्ना साथी संगातीहरुसंग मोबाईल फोनमा कुरा मात्र गरेन, उ रुन नै थाल्यो। व्ह्हां गरेर। वरिपरिका मान्छे छक्क परे। म बिलखबन्दमा परें। म संग छ, रुंदैछ। मैले उसको फोन खोसेर "अफ्" गरिदिएँ।
छ घन्टाको उडानमा मैले दुई पेग व्हिस्की पिएँ। गौतम घुर्रघुर्र गरेर सुत्यो। बिहान अस्ट्रियाको भियनामा हाम्रो "ट्राञ्जीट" थियो। दुई घन्टाका लागि। गौतम शौचालय गयो। अनि आधा ढोका फारेर म संग चिच्यायो, "दाई, यहाँ त पानी हुँदो रहेनछ त ! कसरी धुने?" उसले जीवनमा पहिलो पटक कागजको प्रयोग गर्यो। जहाज उडिसकेपछि हाम्रो उडान नौ घण्टा बाँकी थियो। उसले त्यो बीचमा आफूलाई "शुद्द" तुल्याउन हनुमान चालिसा पढ्यो।
यसपछि, हामी अमेरिका उत्रिएपछिका अनगिन्ति कथा छन्। जो सान्दर्भिक मात्र होईन, एउटा सन्तानको बाउ भैसकेको गौतमको बारेमा मैले त्यस्ता कुरा खोतल्दा मलाई आफै पीडा हुन्छ।
गौतम कांग्रेसी, गुणराज बामपन्थी। आफू न यता न उता। भर्जिनियामा मेरो दाईको घरमा एक रात बसेर मेरिल्याण्ड आउँदा गौतमले गुणराजलाई फोन गर्यो। गुणराज काममा थियो। उसले भन्यो, "तिमीहरु 'सोडा' खाएर बस्दै गर, म आउंछु।" अमेरिकामा कोक, फ्यान्टा अनि स्प्राईटलाई सोडा भन्दा रहेछन। मलाई के थाहा?
म त घुम्दाघुम्दै "लिकर स्टोर" मा गएर एउटा बोतल अनि दुईओटा असली सोडा किन्न भ्याएँ। गुणराज राती एघार बजे तिर आउँदा मेरो "लिकर" अनि "सोडा" खतम। सोडा नामको स्प्राईट सकिनुमा गौतमको पनि योगदान थियो।
गुणराज त्यतिबेला आफ्नो काम छोडेर मेरो लागि काम खोज्न हिंडेको थियो। कहिले सेभेन एलेभेन अहिले सब वे। मलाई साउले शौचालय सफा गर्न भन्थ्यो। म साउको टाउकोमा कुचो हान्न मात्र बाँकी राखेर अरु भन्ने सबै कुरा भन्थें। गुणराज राती मलाई अमेरिकाको "वर्क कल्चर" का बारेमा सत्संग दिन्थ्यो। गौतमले लादी सोहोर्यो। त्यसैले उ ठाउँमा छ। मैले सकिन, म कहीं पनि छैन। गुणराज र मेरो भेट नभएको १२ बर्ष भएछ।
तैपनि, तिमी यति सज्जन मान्छे, किन गर्यौ यस्तो?
तिमीलाई यहाँ अमेरिकामा मान्छेले प्राय: बामपन्थी भनेर बुझ्दा रहेछन। म तिमीलाई साथी भन्दा अरु केही बुझ्दिन। के नेजा नामको यो भगवान शरणम संगठन फुटाउन लायक थियो? के नेजा नामको यो खण्डहर सुमर्ने हैसयत तिम्रो थिएन? थियो। तर तिमी छोटो बाटो हिंड्न आतूर भएछौ। यसको परिणाम भोग्ने तिमी र तिमी जस्तै मान्छे, जसले जोशमा होस् गुमाएर तिमीलाई साथ् दिएका छन्, उनीहरुले भोग्ने हो। गलत भयो साथी। अब या तिमी "ईञ्जा"को बोझ बोक अथवा प्रयास्चित गर। नेजा शुरु गर्दा २००७ मा हामी संगै थियौं। यसलाई कुत्सीत समूहको लहैलहैमा लागेर फुटाउनु जरुरी थिएन। "ईञ्जा" ले तिम्रो स्मारक बनाउने कुरामा मलाई शंका छ।
नेजाका बारेमा लेख्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। त्यो संस्थाको सोह्र ओटा बैठक मध्ये बाह्र ओटामा तत्कालीन सभापतिले गरेको आर्थिक अपचलनका बारेमा मुद्दा उठेको थियो। तिमी चूप भयौ। तिमीलाई नेजाको सभापति हुन पाउने लालसा थियो होला। तर कार्यसमितिका बाँकी सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नका बारेमा जवाफ दिनु त् टाढाको कुरा, भागेर हिंड्ने शैलीले तिम्रो नेतृत्व माथि प्रश्न गर्ने आधार छ।
जे होस्, आज तिमीले सल्लाहकारको सिंहासनमा विराजमान गराएका हरि अधिकारी दाई संग मेरो कुरा भएको थियो। उहाँलाई मैले पहिलो वाकयामै आक्रमण गरें। हरिदाईले भनूभयो, "म त 'फ्लूक़' मा त्यहाँ पुगेको हुँ। जुन प्रकारको त्यहाँ कार्यसमिति बनेको छ, मलाई त्यसमा कुनै बिश्वास छैन। यसले केही गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।"
काम नगरी सलाम खान खोज्ने मान्छेको जमात तिम्रो कार्यसमितिमा थुप्रै छन्। तर हरि दाई मैले चिनेको मान्छे मात्र होईन, नेपालमा मुद्दाको आधारमा हाम्रो झगडा परेको मान्छे हो।
नेजाको कुरा अर्को चोटी। गुणराजको बाटो गलत दिशामा गयो।
पार्टीको चौधौं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने कि नल्याउने भन्ने सवालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच चर्को आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ। बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पौडेलले महाधिवेशन नगराई कार्यसमितिलाई निरन्तरता ...